Media - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Ao amin'ny Evanjelin'i Lioka dia misy lehilahy jamba mikiakiaka manodidina azy. Te hisarika ny sain'i Jesosy izy ary mahazo fitahiana lehibe. Teny an-dalana avy any Jeriko dia nipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo, mpangataka jamba, zanakalahin'i Timaeus. Izy dia iray tamin'ireo maro izay tsy nanantena intsony ny hahita fivelomana. Miankina amin'ny fahalalahan-tanan'ny olona hafa izy ireo. Heveriko fa ny ankamaroantsika dia zara raha afaka mametraka ny tenantsika amin'ity toe-javatra ity mba tena hahafantatra hoe nanao ahoana ny naha-Bartimeo azy ary nangataka mofo hivelomana? Namakivaky an'i Jeriko niaraka tamin'ny mpianany i Jesosy ary ...
Inona no zava-dehibe indrindra amin'ny fiainanao? Jesosy ve Moa ve ny teboka ifantohanao, ny tanjonao, ny fahafcrum anao, ny teboka ifantohan'ny fiainanao? Jesosy no ifantohan'ny fiainako. Raha tsy misy azy aho dia tsy manana aina, tsy misy na inona na inona miasa ho ahy amin'ny làlana tsara. Fa miaraka amin'i Jesosy, fifaliana re izany, miaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra aho. Aorian'ny fanekem-pinoana fa i Jesosy no ilay Mesia, ilay Irak'Andriamanitra, Kristy, dia manamafy aminao aho: "Miara-miaina amin'i Jesosy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao satria eo afovoanao, eo amintsika izany". Nanontany an'i Jesosy ny Fariseo hoe rahoviana no ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Novaliany hoe: "Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy tonga amin'ny fomba hahafahan'ny olona ...
Ny akofa koa dia ampiasaina ho fanoharana amin’ny zavatra tsy misy vidiny ka mila hariana. Ny Testamenta Taloha dia mampitandrina amin’ny fampitahana ny ratsy fanahy amin’ny akofa tsofina. “Tsy mba toy izany anefa ny ratsy fanahy, fa toy ny akofa aelin’ny rivotra.” (Sal 1,4).
«Izaho manao batisa anareo amin’ny rano amin’ny fibebahana; fa izay avy ao aoriako (Jesosy) dia mahery noho izaho, ka tsy miendrika hitafy ny kapany aho; Izy no hanao batisa anareo amin’ny Fanahy Masina sy ny afo. Eny an-tanany ny sombi-mofo ka hanasaraka ny vary amin’ny akofa ary hanangona ny varimbazaha ao an-tsompitra; fa ny akofa hodorany amin’ny afo tsy mety maty” (Mt 3,11- iray).
Raha mijery azy io amin'ny fomba fijerin'ny Kristiana isika, dia ...
Nampanantena ny mpianany i Jesosy hoe: “Indro, Izaho mampitondra izay nampanantenain’ny Raiko ho aminareo. Fa mitoera ao an-tanàna mandra-pahazoany hery avy any amin’ny avo” (Lk 24,49). Naverin’i Lioka ny fampanantenan’i Jesosy hoe: «Ary raha teo aminy tamin’ny sakafo hariva Izy, dia nandrara azy tsy hiala Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan’ny Ray, izay efa renareo tamiko, araka izay nolazainy; fa Jaona nanao batisa tamin’ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin’ny Fanahy Masina, rehefa afaka izany andro izany » (Asa. 1,4- iray).
Ao amin’ny Asan’ny Apostoly no ianarantsika fa ny mpianatra dia nandray ny fanomezana nampanantenaina tamin’ny andro Pentekosta satria – natao batisa tamin’ny Fanahy Masina izy ireo, izay nanome azy ny herin’Andriamanitra. “Ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka dia nitory tamin’ny fiteny samy hafa, araka izay nasain’ny Fanahy Masina holazainy.” (Asa. 2,4).
Tsaroantsika tamin’ny Pentekosta fa niantso antsika ho olom-baovao Andriamanitra: “Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka-mpisorona, olona masina, olona nanan-karena, mba hilazanareo ny fahasoavan’Ilay niantso anareo ho ao amin’ny maizina. hazavana mahafinaritra »(1. Peter 2,9).
Inona no tanjon’ny fiantsoana antsika? Nahoana Andriamanitra no nanendry antsika ho vahoaka hotompoina? Manodidina…